Levitikosy 18 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
18 Ary hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 2 “Mitenena amin’ny zanak’Israely hoe: ‘Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.+ 3 Aza manao toy ny fanaon’ny tany Ejipta, izay nonenanareo.+ Ary aza manao toy ny fanaon’ny tany Kanana, izay hampidirako anareo.+ Aza mitandrina ny lalàny, 4 fa ny didim-pitsarako+ no tokony hampiharinareo, ary ny lalàko+ no hotandremanareo sy hankatoavinareo.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. 5 Tandremo ny lalàko sy ny didim-pitsarako, fa izay olona mankatò izany no ho velona amin’ny alalan’izany.+ Izaho no Jehovah.+ 6 “‘Aoka tsy hisy aminareo hanakaiky ny havany akaiky mba hampiharihary ny fitanjahany.+ Izaho no Jehovah. 7 Aza aharihary ny fitanjahan-drainao+ na ny fitanjahan-dreninao. Reninao izy, ka aza aharihary ny fitanjahany. 8 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny vadin-drainao,+ fa fitanjahan-drainao ihany izany. 9 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny anabavinao, na ny fitanjahan’ny zanakavavin-drainao na ny zanakavavin-dreninao, na teraka tao an-trano ireo na tsia. Aza aharihary ny fitanjahany.+ 10 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny zanakavavin’ny zanakao lahy na ny zanakavavin’ny zanakao vavy, fa fitanjahanao ihany ireo. 11 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny zanakavavin’ny vadin-drainao, izay taranaky ny rainao, satria anabavinao izy. 12 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny anabavin-drainao, fa iray ra amin-drainao izy.+ 13 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny rahavavin-dreninao, fa iray ra amin-dreninao izy. 14 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny rahalahin-drainao. Ary aza manao firaisana amin’ny vadiny, fa nenitoanao izy.+ 15 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny vinantovavinao.+ Vadin’ny zanakao lahy izy, ka aza aharihary ny fitanjahany. 16 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny vadin’ny rahalahinao,+ fa fitanjahan’ny rahalahinao ihany izany. 17 “‘Aza aharihary ny fitanjahan’ny vehivavy mbamin’ny zanany vavy.+ Ary aza maka ny zanakavavin’ny zanany lahy na ny zanakavavin’ny zanany vavy, mba hampiharihariana ny fitanjahany. Iray ra ireo, ka fitondran-tena baranahiny+ izany. 18 “‘Aza maka ny rahavavin’ny vadinao ho rafivaviny,+ mba hampihariharianao ny fitanjahany. Aza maka vady azy ho fanampin’ny vadinao raha mbola velona koa ny vadinao. 19 “‘Aza manakaiky vehivavy mba hampiharihary ny fitanjahany,+ raha mbola maloton’ny fadimbolany+ izy. 20 “‘Aza manao firaisana* amin’ny vadin’ny namanao, ka hanjary ho voaloton’izany.+ 21 “‘Aza misy atokana*+ ho an’i Moleka+ ny taranakao. Aza zimbazimbaina+ amin’izany fomba izany ny anaran’Andriamanitrao. Izaho no Jehovah.+ 22 “‘Aza manao firaisana amin’ny lehilahy+ toy ny fanaovana firaisana amin’ny vehivavy,+ fa zava-maharikoriko izany. 23 “‘Aza manao firaisana amin’ny biby,+ ka hanjary ho voaloton’izany. Ary aoka tsy hisy vehivavy hanakaiky biby mba hanao firaisana aminy.+ Tsy fanao voajanahary mantsy izany. 24 “‘Aza mandoto tena amin’izany zavatra izany, fa nandoto tena tamin’izany rehetra izany ireo firenena izay horoahiko tsy ho eo anatrehanareo.+ 25 Koa maloto ilay tany, ka hosaziko izy io noho ny fahadisoany, ary haloan’ilay tany ny mponina ao aminy.+ 26 Tandremo ny lalàko sy ny didim-pitsarako.+ Aza misy ataonareo izany zava-maharikoriko rehetra izany, na ianareo teratany na ny vahiny monina eo aminareo.+ 27 Izany zava-maharikoriko rehetra izany mantsy no nataon’ireo tompon-tany talohanareo,+ hany ka maloto ilay tany. 28 Raha tsy mandoto an’ilay tany mantsy ianareo, dia tsy haloany tahaka ny nandoavany ny firenena talohanareo.+ 29 Raha misy olona manao ny iray amin’ireo zava-maharikoriko ireo, dia haringana tsy ho eo amin’ny fireneny izy.*+ 30 Ary ataovy ny adidinareo amiko, ka aza manaraka an’ireo fanao maharikoriko natao teo anatrehanareo ireo,+ mba tsy handotoanareo tena amin’izany. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.’”
A.b.t.: “Aza manome ny tsirinainao.”
Na: “atao sorona.”